AmaCabañuelas, ayini futhi asebenza kanjani, ngokuvamile alungile? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izibikezelo
Namuhla sizokhuluma ngendlela yokubikezela kwesimo sezulu esetshenziswa kakhulu ezindaweni zasemakhaya futhi lokho kuya ngokuya kufaneleka. Imayelana nama-cabañuelas. Kubantu abakhulele edolobheni, lo mqondo awaziwa kakhulu. Kodwa-ke, kulabo abahlala noma abake bahlala ezweni, igama elisetshenziswa kakhulu ngenyanga yokuqala yonyaka. Futhi ukuthi kuyisethi yezindlela ezisiza ekubikezelweni kwesimo sezulu ngonyaka.
AmaCabañuelas aqhubeka nokusetshenziswa namuhla futhi aya ngokuya ephumelela ngokwengeziwe. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi zakhiwa kanjani futhi siyini isibikezelo salo nyaka we-2018?
1 Umsuka wama-cabañuelas
2 Izici nemodi yokubikezela
3 Cabañuelas ngo-Agasti
4 Ukubikezelwa kweCabañuelas kwe-2018
5 Ngabe ama-cabañuela aqinisile?
6 ICabañuelas 2016-2017
AmaCabañuelas asetshenziswa eningizimu yeSpain naseMelika. Umsuka wayo uvela eBhabhiloni lasendulo. Impucuko yaseMexico yayisebenzisa lolu lwazi ngamaMaya. Womabili amakhalenda anezinyanga eziyi-18 nezinsuku ezingama-20. Phakathi nezinsuku zokuqala eziyi-18 zikaJanuwari, izinyanga zonyaka nezinsuku ezimbili ezisele zibikezelwe ngezinye izinto. Umhla ziyi-19 kuJanuwari usetshenziselwa ukubikezela ubusika besikhathi sasehlobo kanye nomhlaka 20 ebusika.
Kukwazile ukuqinisekisa ubudlelwano phakathi kwama-cabañuelas nosuku lokuqala luka-Agasti. Kusukela kulezi zinsuku singazi izimo zezulu ezizokwenzeka unyaka wonke. Akuzona zonke izindawo lapho kubanjelwa khona ama-cabañuelas alandela inyanga ka-Agasti njengesibonelo. ENingizimu Melika, ngokwesibonelo, basebenzisa inyanga kaJanuwari ukubikezela isimo sezulu. Ngakolunye uhlangothi, amaHindu asebenzisa izinyanga eziphakathi nobusika.
Izici nemodi yokubikezela
Indlela esetshenziselwe ukwenza ukubalwa okulungile noma okuncane ingaba yinkimbinkimbi impela. Kufanele ube nokubekezela okwanele nenkumbulo enhle uma ufuna ukukwenza kahle.
Siqala ngokuchaza ama-cabañuelas we-ida. Imayelana nokuhlola izinsuku zokuqala eziyi-12 zonyaka. Kufanele bakhombise isimo sezulu esizoba naso ezinyangeni eziyishumi nambili zonyaka. Lokho wukuthi, uJanuwari 1 ngeke asikhombise isikhathi sikaJanuwari, owesibili kaJanuwari nokaFebhuwari, njalonjalo.
Ngakolunye uhlangothi, kunjalo ama-cabañuelas emuva. Lokhu kwenzeka kusuka ngoJanuwari 13. Zisetshenziselwa ukubikezela isimo sezulu sezinyanga ngokwehla. Lokho wukuthi, uJanuwari 13 kungaba yisikhathi ngoDisemba, uJanuwari 15 ngo-Okthoba, njll. Kusukela ngomhlaka 25 kuya kumhlaka 30 Januwari, sizobe sikhuluma ngokulingana kwesimo sezulu njalo ezinyangeni ezimbili. Lokho wukuthi, uJanuwari 25 umele izinyanga zikaJanuwari noFebhuwari, ezingama-26 zilingana nezinyanga zikaMashi nezika-Ephreli, njll.
Kuthathwa-ke ngoJanuwari 31 bese ihlukaniswa ngamahora amabili ngezikhathi ezehlayo. Kusuka ku-12 kuye ku-2 inyanga kaDisemba, kusuka ku-2 kuye ku-4 inyanga kaNovemba, njalonjalo.
Lapho nje inyanga kaJanuwari isidlulile ngokuphelele, isimo sezulu sezinyathelo ngasinye esenziwayo siyathathwa bese kwenziwa isilinganiso. Lo mphumela uzokhombisa isimo sezulu senyanga okukhulunywa ngayo ukuthi sifuna yiphi. Isibonelo, ukubikezela isimo sezulu ngoFebhuwari, kungadingeka ukubheka isimo sezulu ngoJanuwari 2 + isimo sezulu ngoJanuwari 23 + isimo sezulu ngoJanuwari 25 + isimo sezulu ngoJanuwari 31 phakathi kuka-8 no-10 ebusuku .
Kwabaningi le ndlela izobonakala iyinkimbinkimbi. Ngaphezu kwalokho, ayinakho ukuqina kwesayensi, ngoba isikhathi sikaJanuwari noma u-Agasti asihlangene nakancane nonyaka. Sikhuluma ngamasiko athandwayo enziwe kusukela kubantu basendulo. Lapho isimo sezulu sasingaziwa noma sasingathuthuki kakhulu kuso, ama-cabañuelas ayeyindlela enhle yokubikezela isimo sezulu.
Kuyindlela ethokozisayo ongayenza bese uhlola, unyaka wonke, izinga lempumelelo onalo. Kukhona nama-cabañuela ngo-Agasti. Indlela iyafana, kepha yenziwa ngo-Agasti ukubikezela unyaka olandelayo. Zisekelwe ekhalendeni leZaragoza. Zihlukaniswe izikhathi ezimbili, kusuka ngo-Agasti 1 kuya ku-13 kuzenzeko ezizokwenzeka emasontweni amabili okuqala kusuka ngoJanuwari kuya kuDisemba, futhi kusukela ngo-Agasti 13 kuya ku-24, kuzokwenzekani engxenyeni yesibili yonyaka.
Ukubikezelwa kweCabañuelas kwe-2018
Abantu abazinikele ekubaleni isimo sezulu besebenzisa le ndlela babizwa nge-cabañuelista. Ngo-Agasti 2017, uJuan Manuel de los Santos, uthisha waseSecondary kanye neChemistry waseValverde del Camino (Huelva), uchaze isibikezelo sakhe sango-2018.
Ama-cabañuelas abikezela unyaka wesomiso esibi kakhulu e-2018 nokuthi ngeke kube khona thuba lemvula ngezinsuku zokuqala zikaJanuwari. Uxwayise ngokuthi kuzoba unyaka omubi kakhulu uma kukhulunywa ngesimo sezulu. Kwakungumnyaka owomile ngokuphelele. Kodwa-ke, phakathi nezinyanga ebesiku-2018, imvula ibiningi impela kulo nyaka. Bafinyelele ebuningini obuthi iSpain ikwazile ukubuyisa kusuka kuma-37% wamachibi okuya kuma-72%. Lokho kusho ukuthi, isilinganiso samachibi aseSpain angama-72%.
Ngakolunye uhlangothi, esinye isazi sama-cabañuelas sabiza U-Alfonso Cuenca yabikezela imiphumela ehluke kakhulu. Kuyena, u-2018 ubezoba ngenye yezimvula ezinkulu. Manje ngubani kubo oqinisile? Ama-cabañuelas ayiqiniso ngezinga elingakanani? Kumele sikhumbule ukuthi yizindlela ezindala futhi azisekelwa yisayensi. Ngakho-ke, ukunemba kwayo kuncike ezicini eziningi.
Ngabe ama-cabañuela aqinisile?
Ngokuya ngomuntu owenza indlela yokubikezela, kuzophuma umphumela noma omunye. Kuyiqiniso ukuthi uma sithatha ukubikezela kuka-Alfonso, kungaba okulungile, kepha uma sikhetha iSantos, cha.
Iqiniso ukuthi ama-cabañuelas aya ngokuya efaneleka ngoba izinhlelo zezulu zibikezela kakhulu. Lokhu kungenxa yokuguquka kwesimo sezulu. Ukufudumala kwembulunga yonke kwandisa imvamisa kanye namandla esomiso, ngakho-ke akunzima kakhulu ukubikezela ukuthi unyaka uzoma.
Ngonyaka we-2016-2017 i-cabañuelista yethu u-Alfonso Cuenca wabikezela lokho izimvula bezizoba zincane kakhulu. Kuphela ngesikhathi sentwasahlobo nangesikhathi sePhasika. Ukuphela konyaka bekuzokoma kakhulu. Kulokhu, yomibili le minyaka ibifudumele futhi yomile kakhulu selokhu kwaqoshwa imvula.
Lapha sikushiya ikhalenda yokubikezela yale minyaka emibili:
Ngiyethemba uluthandile ulwazi mayelana nama-cabañuelas futhi hlala ubukele lawo we-2019!
Uma ufuna ukwazi ukuthi izazi zezulu zibikezela kanjani isimo sezulu, chofoza lapha:
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izibikezelo » Ama-cabañuelas
Okwelinye i-athikili ye-homeopathy?
Ihlobo laseSan Miguel